GAWAARIDA TAAYIRADA LEH GACMAHOODA: FASAL SARE LEH SAWIRRO IYO FIIDIYOOW - GACMO-GACMEEDKA DIY
Mulkiilayaasha baabuurta badan ee garaashka boodhka gaboobay - iyaga oo tuuraya ama caajis ah, ama mar, ama si ula kac ah loo hayo haddii ay si lama filaan ah u yimaadaan. Taayirada hore waxaa badanaa loo isticmaalaa inay abuuraan xuduudaha, sariiraha ubaxyada ubaxyada, qalabka isboortiga iyo goobaha lagu ciyaaro ama abuuritaanka qurxinta asalka ah ee beerta iyo barxadda. Mid ka mid ah doorashooyinka qurxinta ayaa ah tuugo ka yimid taayirrada baabuurta ee hore. Xirfadlayaashu waxay awoodi doonaan inay ka dhigaan gacmohooda, dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay maadooyinka waa taayirro iyo qalabyo iyo dhowr saacadood oo wakhtigaaga ah.
Gawaarida taayirada ah
Laga yaabe inaysan ka jirin dhulalka wadamadii hore ee USSR ee magaalo oo aan laheyn beerta beerta ama dayrka ee qaabka taayirada baabuurta. Hirgelinta xirfad leh, nasharrada noocan oo kale ah waxay u egyihiin si quruxsan, asalka, abuuristoodu waa mid deg deg ah, fudud oo dhaqaale ah oo ka yimaada dhinaca dhaqaalaha iyo mid gaaban. Gacanta qurxinta, iyo qaab wanaagsan oo ka mid ah labada nin ee geelu waxay ku dari doonaan xajinta goobtaada waxayna si cad u soo jiidan doontaa dareenka martida.
U qurxin gurigaaga farshaxanada lagenariya laguna xiro.
Ma taqaanaa? Taariikhda muuqaalka taayirada baabuurtu waxay dib ugu dhacaysaa illaa 200 sano - ugu horeysay ee noocan oo kale ah ayaa loo daboolay oo loo soo bandhigay dadweynaha sannadkii 1846.
Sida loo dhigo godka taayirada: talaabo talaabo talaabo ah
Waa lagama maarmaan in la abuuro qurxinta asalka ah ee beerta waddada, sababtoo ah geedi socodka xoqidda caaggu wuxuu kululeyn doonaa, sii deynaya walxaha kiimikada leh ee khatarta ah ee aan fududayn in qolka laga saaro. Haddii aad ku shaqeyso garaash, waxaa lagugula talinayaa in aad xirtid neefsashada.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo kobciyo beertaada gacmo-gacmeed, sida loo sameeyo ladybird si loo qurxiyo goobta, sida kor loogu qaado ubaxa beerta.
Qalabka iyo alaabta loo baahan yahay
Laga soo bilaabo qalabka aad u baahan tahay kuwaan:
dharka (waxaa lagu beddeli karaa mindi fiiqan);
Alaabta loo baahan yahay waxaa ka mid ah:
taayirrada tirooyinka la rabo;
silig qaraha weyn (1.5-2 m);
silig khafiif ah (20 cm);
rinjiyada qurxinta (caddaan, casaan, madow), u adkaysata iftiinka qorraxda iyo roobka.
Waa muhiim! Taayirada, waa in la doorto "bald" iyo dharka nabrooniga ah, ka sokow biraha - taasi waxay si aad ah u fududaynaysaa habka loo shaqeynayo, iyo sidoo kale in laga ilaaliyo dhaawaca suurtagalka ah.
Si aad u bilawdo, tixgeli waxyaabaha gaarka ah ee ku shaqeynaya calaamadda, sababtoo ah adigoon adigu adigoon jilicsanayn waxaad ku dari kartaa hudheel qurux badan. Ugu horreyn, waa lagama maarmaan in la sawiro labo xaraf oo isbarbardhigaya furitaanka hore ee gudaha, oo kala badh ka mid ah alaabta - kuwaasi waxay noqon doonaan baalal. Xuddunta dibedda fogaanta ilaa bilowga ilaa dhamaadka khadadka waxay u eg tahay dhererka qoorta iyo madaxa. Madaxa wuu ka nasayaa dabada.
Qiyaasaha ugu muhiimsan ee qaybaha sanku:
gogo (dherer 9 cm, width 4 cm);
madaxa (dhererka 11-12 cm, width 8 cm);
qoorta (4 cm ballaaran ee madaxa, 10 cm saldhiga).
Gawaarida beerta waxay gacan ka geysan doontaa qurxinta xayiraadda xagaaga xagaaga, go'aanka xiisaha leh sidoo kale wuxuu noqon karaa dhir diiran, kaas oo la samayn karo gacmahaaga.
Marka qalabka oo dhan la diyaariyo, waxaad bilaabi kartaa geeddi-socodka abuurista qurxinta beerta:
Taayirada si fiican uga dhaq boodhka iyo sunta kale. Tani waxay fududeyneysaa oo ka dhigi doontaa mid aad ufiican si ay ula shaqeeyaan iyaga oo dheeraad ah, marka lagu daro, rinjiga ayaa ku dhajin doona alaab nadiif ah oo ku sii haya si aad u fiican.
Marka taayiradu ay qalalan yihiin, ku calaamadee calaamadaynta qiyaasta cawska iyo cajalad. Baalasha waxaa loo samayn karaa habka ugu fudud - adigoo sawiraya nusqaatid kala duwan, ama si aad uga dhigto iyaga.
Waa wakhti aad ku xirato dhejiyeyaasha iyo dhar gabbaad ah oo adag ama gacmo gashi. Marxaladani waxay lagama maarmaan u tahay mindi ama farsamo si ay u sameeyaan meelo badan oo ka mid ah godka madaxa iyo gagaarka si ay jigsaw loogu dhex galo furitaanka. Haddii aad ka dhigto godadka noocyada oo dhan ah, waxay noqoneysaa mid aad u fudud in la gooyo.
Tallaabada ugu muhiimsan, ee waqti-qaadashada iyo jaah-wareerka ayaa goynaya qaabka. Waxaa ugu wanaagsan in la shaqeeyo jajab ah xawaaraha dhexdhexaad ah, oo ka soo jeeda saldhigga qoorta ilaa shimbirta madaxa.
Marka tuubada la gooyo, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo jarista mindi ama waxsoosaar: samee miisaan iyo hagaag.
Alaabta waa in loo rogaa dibedda si ay u qaataan boos dhab ah.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad la shaqeyso madaxa iyo qoorta sheyga, sababtoo ah iyada oo aan shaxanka aysan awoodi doonin in ay qaataan qaabka jilicsan ee la doonayo. Si arrintan loo sameeyo, qoorta qoorta, samee laba god oo kasta 15-20 cm oo xarig kasta ah iyo maro giringir ah oo khafiif ah. Dabadeedna waxay ku sii socotaa iyaga oo maraya silig qaro weyn leh, oo u adeega qaab shaxan ah, isla markaasna siinaya farshaxanka booska la rabo.
Marxaladda ugu dambeysa waa rinjiga hudanka cad ama midab kale oo la rabo.
Waa muhiim! In geedi-socodka jarida qaabka aad u baahan tahay inaad la shaqeyso jigsaw jajab ah, qaybo yar oo 5-10 cm, isla markiiba jarida labada dhinac ee godka.
Si aad u sameyso quruxda u muuqata mid ka sii daba dheeraatay beerta, waxaad ku dari kartaa boodh dabiici ah oo ka sameysan taayirada isku midka ah. Si loola socdo beelaha, xirmooyinka xirmooyinka waaweyn waa kuwo ku habboon, ka dibna lagu rinjiyeeyo madow.
Xagee loo sameeyaa farshaxan: talooyin iyo khiyaamo
Markaad dooranaysid goobta meesha lagu qurxiyo qurxinta beerta, waa in lagu hagaajiyaa maaha oo kaliya dhadhankaaga, laakiin sidoo kale waxay tixgelisaa arrimaha qaarkood, sida iftiinka goobta iyo roobabka. Inkasta oo lakabka rinjiga, oo ka ilaalin doona taayirada wax yar oo ka yimaada saameynta dibedda, ma aha wax ku filan in lagu ilaaliyo alaabta ka soo baxa iyo dillaac, taas oo si aan macquul ahayn u dhici karto qashinka bidix ee qorraxda. Waxa kale oo ay si xun u saameynaysaa gogol-dhaafka biyaha. Sidaa daraadeed, waxay u fiicantahay in la dhigo godad caag ah oo ku yaal qaybta hoose ee beerta ama hoostiisa hoostiisa si qorraxda iyo buuruhu aysan u dhicin. Heerkulka hooseeya wuxuu sidoo kale saameyn ku yeelan karaa xaaladda alaabta, sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa in loo geeyo geerashka jiilaalka.
Ma taqaanaa? Taayirada ugu weyn iyo tan ugu culus waxaa loo sameeyaa baabuurta dumpka (BelAZ) - taayiradu waxay culeyskeeda u jirtaa 5 tan oo leh dhexroor qiyaastii 4 mitir.
Daaqada "Swan Decor" waxay u muuqataa mid u dhow u dhow barkada beerta ama dhirta, laakiin haddii aysan jirin wax, markaa alaabta ayaa la dhigayaa meel u dhow sariirta ubaxa. Taayirada baabuurta ee madow waxay ku siin karaan nolol labaad iyagoo abuuraya qurxiyo beerta asalka ah. Guud ahaan, tani waa xal miisaaniyadeed oo aad u fiican oo loogu talagalay qurxinta goobta, oo aad abuuri karto waqti aad waqti fiican ku qaadato waqtiga firaaqada.
Fiidiyow: Daaro ka samee taayirrada adiga ayaa sameeya